Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọrụ Mgbasa Ozi Waya » Kedu ka ọrịa ọjọọ siri gbanwee agụmakwụkwọ ile ọbịa?
Ọrịa ọjọọ emetụtala ụlọ ọrụ ọ bụla na ụlọ ọrụ ile ọbịa bụ nke kacha eme ngwa ngwa maka mgbanwe na -eme gburugburu ụwa. Njirimara nke ụlọ nrụpụta na nkwụsi ike sitere na ụlọ ọrụ ahụ egosipụtala onwe ya n'ọnọdụ ọrịa. Ụdị ndị ọbịa na-ebute ile ọbịa na-amalitekwa na mpaghara dịka arụmọrụ, na-ebute nrụrụ aka dị ọnụ ala. Enwere ọtụtụ njikọta teknụzụ na ụdị ndị a ma ha na -aghọwanye ihe ọhụrụ.
Dr Suborno Bose, onye isi oche na onye isi Mentor nke IIHM, ekwuola ogologo oge tupu nhọrọ nhọrọ nke ụmụ akwụkwọ na -aga ụlọ akwụkwọ ọzụzụ ọbịa. Taa, ọrịa na -efe efe amụbaala naanị ohere maka ndị gụsịrị akwụkwọ ile ọbịa na IIHM na -ebute ụzọ n'ịzụ ụmụ akwụkwọ na ịkwadebe ha maka ụlọ ọrụ. Dr Bose kwenyere na ụwa ga-ekewapụta ọrịa ga-emepụta ohere maka ndị na-achọ ụlọ ọrụ yana ga-achọ nghọta ka ukwuu banyere mpaghara ndị na-adịwanye mkpa ụbọchị ndị a dị ka ọganihu teknụzụ na ngalaba ile ọbịa.
Ụwa na-efe efe ga-emepụta ụzọ ọhụrụ na nke a na-atụghị anya ya maka ụmụ akwụkwọ ile ọbịa. Ụlọ ọrụ ahụ ga-achọ nghọta ka ukwuu maka mpaghara dịka azịza teknụzụ, ụdị ọrụ mmetụ dị ala, njikwa ọdachi, atụmatụ arụ ọrụ na nkwado ndabere. Site n'ọchịchọ ndị dị otú a, mkpa ndị ọkachamara ile ọbịa nka nwere ike ịbawanye. Yabụ, agụmakwụkwọ ga-enwekwa ụmụ akwụkwọ nkwado nwere nka nke ga-eme ka ha rụọ ọrụ nke ọma ma dị njikere maka ọdịnihu, ile ọbịa dịka ọrụ ga-aga n'ihu na-agbasi ike, na-achọ ma na-atọkwa ụtọ.
Mmụta ile ọbịa gụnyere ọtụtụ ọzụzụ bara uru na ikpughe na IIHM na -enye ha abụọ iji hụ na mmepe ụmụ akwụkwọ zuru oke. Ọ bụ ezie na IIHM na -azụ ha ka ha banye n'ahịa ọrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche, ọ na -akpalikwa ha ịmalite ọrụ nke ha na mpaghara ọ bụla masịrị ha. O nwekwara ụlọ ọrụ mmepe ọchụnta ego pụrụ iche akpọrọ SAHAS. Nke a bụ ego ego nke sitere na ebe enwere ike kenye ụmụ akwụkwọ nwere ezi mmasị ịmalite ọrụ nke ha isi obodo. Ha ga -edobe ụdị azụmaahịa bara uru na nke ga -emezu iji nwee ike nweta ụlọ ọrụ SAHAS.
Ọnọdụ ọrịa a mere ka ọtụtụ ndị na -eto eto na -eche ihe ha ga -eme n'ọrụ ha. Agbanyeghị, ọtụtụ ụmụ akwụkwọ IIHM bidoro ọrụ nke ha n'oge mkpọchi oria ojoo nke Covid-19 ma ha ka na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ ha nke ọma. IIHM na -enye gburugburu ebe nkwado na sistemụ nkwado ebe ụmụ akwụkwọ na -enwe mmetụta nke mmụọ nsọ na obi ike ịtụgharị nrọ na echiche ha ka ọ bụrụ eziokwu.
IIHM mepụtara ego corpus site na atụmatụ akpọrọ SAHAS. Echiche bụ ịgba ụmụ akwụkwọ ume ka ha malite ọrụ nke aka ha na IIHM ga -akwado echiche ha site na SAHAS. Ebumnuche a kpaliri ọtụtụ ụmụ akwụkwọ imepụta ihe ọhụrụ n'oge mkpọchi ma malite mmalite nke ha.
Nka kacha chọọ n'ahịa taa bụ nka dị nro. Ọtụtụ akwụkwọ nyocha na ndị na-eche echiche ebuola amụma na ụwa ga-emecha gbasaa ga-elekwasị anya na nka dị nro. Nke a pụtara ọtụtụ nkwalite nka mmadụ dị oke mkpa na ụlọ ọrụ ile ọbịa.
IIHM na -enyere ụmụ akwụkwọ aka ịghọta ma mara ike nka dị nro. Ka ụmụ akwụkwọ a na -ewepụta ụzọ ọrụ ha, nka ndị a dị nro ga -abụ isi ihe na -ekpebi ọdịnihu ha ma mee ka ha bụrụ ndị na -agbanwe agbanwe na ndị na -eme mgbanwe, zụlite ikike ịgbanwe echiche, ịlụ ọgụ na -ejighị n'aka ma guzobe ntụkwasị obi. Àgwà ndị a ga-enyere ha aka ma n'oge dị mkpirikpi ma ogologo oge ka ha na-enyocha ohere na ụzọ ọhụrụ n'ime ụwa ajọ ọrịa.
N'oge ọrịa ahụ, IIHM nwara ịkwali ụmụ akwụkwọ, ngalaba yana ndị ọrụ. Nọgide na -enwe mmekọrịta chiri anya na ụmụ akwụkwọ iji ghọta mkpa na ihe ịma aka ha na -enyere aka mee ka ha jikọọ na agụmakwụkwọ na mmemme kampos site na ntanetị. N'afọ gara aga, ememme mmemme n'etiti kọleji nke IIHM, Rigolo mere, n'elu ikpo okwu n'ịntanetị ebe a gbara ụmụ akwụkwọ ume isonye na igosipụta nka ha.
Mgbe ebili mmiri mbụ bidoro na 2020 na mba ahụ niile wee banye mkpọchi, IIHM bụ otu n'ime ụlọ ọrụ izizi kpebiri ịga n'ihu na usoro agụmakwụkwọ site na ntanetị. Ebe anyị nwere teknụzụ anyị ebe, anyị nwere ike bido klaasị ozugbo. Agbanyeghị Dr Bose rụtụrụ aka na IIHM nwere nzụlite klaasị dị ka ọtụtụ ndị osi nri mba ụwa na ndị ọkachamara na -ele ọbịa na -ewerekarị klas n'ịntanetị n'oge gara aga. Yabụ na nke a bụ ohere ọzọ maka inyocha usoro mmụta afọ ọhụrụ.
A na -akọwawanye echiche na -ezighi ezi na ile ọbịa na -emetụta naanị ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelsụ na ọ bụ otu a ka IIHM si aga n'ihu na agụmakwụkwọ ya. Enwere ụwa ohere na -echere ụmụ akwụkwọ ile ọbịa na IIHM na -akpali ụmụ akwụkwọ oge niile inyochakwu ohere azụmaahịa na ohere achụmnta ego. A na-achọ ụmụ akwụkwọ ile ọbịa n'ụlọ ọrụ dị iche iche dịka njem, njikwa ihe omume, ụlọ akụ, ahụike, ezigbo ala na ụlọ, azụmaahịa okomoko, ụgbọ elu, ụgbọ mmiri na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọrụ ndị a gụnyere mgbanwe na ọrụ ma na -enyekwa ohere imepụta ihe na mmekọrịta onwe onye. A na -akụzikwara ụmụ akwụkwọ nri, ọchụnta ego na azụmaahịa nke na -akwadebe ha na ntọala nke na -adịzi njikere maka azụmaahịa n'ọdịnihu.
Ọhụụ IIHM bụ iwere agụmakwụkwọ ile ọbịa gaa n'ọkwa dị iche nke ga -akwadebe ụmụ akwụkwọ taa maka ọrụ na azụmaahịa echi. Iduzi mgbanwe ahụ na ịkwadebe ụmụ akwụkwọ ya maka ọnọdụ ọhụrụ nke gbanwere ụwa ruo mgbe ebighi ebi n'ime afọ abụọ gara aga. Na -enyocha ohere agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ ile ọbịa nke kpatara mmemme mmemme FIIHM nke gụnyere ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị ọkachamara niile ga -enye ndụmọdụ ma kesaa ụmụ akwụkwọ ahụmịhe ụlọ ọrụ ha. A na -emebekwa ebe nyocha maka njem nlegharị anya nke bụ mkpa nke elekere ka agụmakwụkwọ ile ọbịa wee jikọta nke ọma na ọmụmụ njem.
DR Suborno Bose onye isi ụlọ akwụkwọ IIHM Hotel School na -eduga ụlọ ọrụ ahụ n'ihu na -achọ ma na -emegharị agụmakwụkwọ maka ọkwa ọhụrụ nke bụkwa mkpa elekere.